Khilaaf ka taagan cida sugeysa amaanka Madaxtooyada Galmudug oo shir ka dhacayo | Dhexnimo Media
Home Wararka Khilaaf ka taagan cida sugeysa amaanka Madaxtooyada Galmudug oo shir ka dhacayo
Khilaaf ka taagan cida sugeysa amaanka Madaxtooyada Galmudug oo shir ka dhacayo
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in khilaaf uu ka jiro cida sugeysa amaanka Madaxtooyada Galmudug uu dhawaan ka dhacayo shirka Madaxda DF iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sida aan wararka ku helnay Madaxda maamul goboleedyada qaar gaar ahaan Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa kasoo horjeestay in amaanka xarunta Madaxtooyada Galmudug la wareegaan ciidamada Koofiyo casta ee ilaaliya Madaxweyne Farmaayo.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in ay codsadeen in amaanka xarunta Madaxtooyada inta uu shirku socdo loo dhaafo ciidamada maamulka Galmudug oo horey amaanka u ilaalinayay.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor ayaa la sheegay in uu wado dadaalo uu ku xalinayo khilaafkan ka dhashay cida sugeysa amaanka Madaxtooyada inta uu shirku socdo, waxaana hada amaanka la wareegay Ciidamada ilaalada u ah Madaxweyne Farmaajo.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa magaalada Dhuusomareeb horey ula tagay ciidamo badan oo iyaga si gaar ah amaankooda u ilaalinaya, waxaana hada laga cabsi qabaa in Madaxda qaar ilaaladooda laga celiyo Madaxtooyada maadaama Madax sar sare joogto.
Magaalada Dhuusomareeb waxaa hada ku sugan Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’isul Wasaaraha iyo afar kamid ah Madaxda maamul goboleedyada, waxaana saacadaha soo socda la filayaa in Madaxweynaha Puntland gaaro Dhuusomareeb.
Madaxda dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa magaalada Dhuusomareeb ku yeelanaya shir xasaasi ah oo indhaha lagu wada hayo, waxaana shirkan diirada lagu saari doonaa arinta nuuca Doorashada dalka ka dhaceysa .
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Itoobiya oo socdaal lama filaan ah ku tagay Asmara
Next articleAktarad caan ku ah aflaamta Hindiga & gabadheeda oo laga helay cudurka COVID-19